ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်တွင် ကူးစက်ခံရသူ ၄၉၂-ဦးကို ၁-ရက်အတွင်း အများဆုံးအဖြစ်တွေ့ရှိ။ Covid-19 ဖြင့် သေဆုံးသူ ၁၀၀-နှင့်အထက်သို့ရောက်ရှိရန် ၃၄-ရက်ကြာခဲ့ပြီး၊ သေဆုံးအရေအတွက်အများဆုံး ၄၇ မြောက်နိုင်ငံဖြစ်လာ၊ – H2Oupdatenews
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်တွင် ကူးစက်ခံရသူ ၄၉၂-ဦးကို ၁-ရက်အတွင်း အများဆုံးအဖြစ်တွေ့ရှိ။ Covid-19 ဖြင့် သေဆုံးသူ ၁၀၀-နှင့်အထက်သို့ရောက်ရှိရန် ၃၄-ရက်ကြာခဲ့ပြီး၊ သေဆုံးအရေအတွက်အများဆုံး ၄၇ မြောက်နိုင်ငံဖြစ်လာ၊
oungmarine11@outlook.com 21/04/2020	1 Comment
လတ်တလော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားလျှက်ရှိစဉ် သေဆုံးသူ ၁၀၀ နှင့်အထက်နိုင်ငံများတွင် တနင်္လာနေ့၌ Covid-19 ဖြင့် အသက်ဆုံးရှုံးရသူ ၁၀၁-ဦးရှိသော ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှမှာ ၄၇ နိုင်ငံမြောက် သေဆုံးမှု အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ ၎င်းနေ့တွင် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးစွဲကပ်လျှက်ရှိသူ ၄၉၂-ဦးတွေ့ရှိသဖြင့် ၂၄-နာရီအတွင်း အတည်ပြုရသည့် အများဆုံးအရေအတွက်လည်း ဖြစ်ကြောင်း Dhaka Tribune က ယမန်နေ့ ရေးသားသည်။
ထို့ပြင် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သည်ယူကရိန်း၊ ဂရိတို့နှင့်တန်းတူ ၃၄-ရက်အကြာ၌ သေဆုံးသူ ၁၀၀ နှင့်အထက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ရာ အဖိတ်အစင် အလျှင်မြန်ဆုံးနိုင်ငံများတွင် အဆင့် ၂၂- သို့ ရောက်ရှိလာသည်ဆို၏။ ဤတွင် စပိန်နိုင်ငံသည် ၁၁-ရက် ဖြင့် အလျှင်မြန်ဆုံးဖြစ်ပြီး တူရကီ၊ ဘရာဇီးနှင့် ရိုမေးနီးယားတို့က ၁၂ ရက်၊ ပေါ်တူဂီက ၁၄-ရက်အကြာ၌ လူ ၁၀၀ နှင့်အထက် သေဆုံးခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံအတွင်း လူကို သေစေနိုင်သော SARS-CoV-2 ရောဂါပိုးစွဲကပ်လျှက်ရှိသူ ၃-ဦးကို ပထမဆုံးတွေ့ရှိနောက် ၁၀ ရက်အကြာ မတ်လ ၁၈-ရက်နေ့တွင် လူ ၁-ဦး စတင်သေဆုံးခဲ့သည်။
ဒါကာမြို့တော်နှင့် ခရိုင်အတွင်း Covid-19 ရောဂါကူးစက်ခံရမှု အရေအတွက် အများဆုံးဖြစ်ပွားနေစဉ် ဒါကာမြို့ မစ်ဖို့ဆေးရုံတစ်ခုတည်းမှာပင် ဆရာဝန် ၂၃-ဦးအပါအဝင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၄၂-ဦးတို့၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စွဲကပ်ခံရကြောင်း၊ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်မှ အနည်းဆုံး ဆရာဝန် ၂-ဦးလည်းပါဝင်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ဆရာဝန်များဖောင်ဒေးရှင်းက သတင်းထုတ်ပြန်သည်ဟု ယမန်နေ့ Dhaka Tribune ၏ အခြားသတင်းတစ်ပုဒ်တွင်တွေ့ရှိရသည်။
တနင်္လာနေ့ နံနက် ၆-နရီအထိ နာရီပေါင်း ၃၀ အတွင်း နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ အခြား ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်း ၆၂-ဦးတို့၌လည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်လျှက်ရှိပြီး အထူးသဖြင့် ဧပြီလ ၁၅-ရက်နေ့ ၁-ရက်တည်း၌ ၅၄-ဦးအထိ တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် စုစုပေါင်း ၁၇၀-ဦးရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကူးစက်ကပ်ရောဂါကျရောက်စဉ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတို့မှာ ၅-ရက်အတွင်း အရေအတွက် ၃-ဆ တိုးမြင့်၍ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးစွဲကပ်ခံရကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ထွက်နေသည်။
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်တွင် Covid-19 ရောဂါခံစားရသူလူနာများအား ကုသမှုပေးနေရသည့် နိုင်ငံပိုင် အထူးကြပ်မတ်ကုသရေး ICU ဆေးရုံများ၌ အသက်ရှူစက် တွဲလျှက်ပါဝင်သည့် ICU ကုတင် ၁၉၂-ခုသာရှိခြင်းမှာ လိုအပ်ချက် ကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်နေသည်ဟု Dhaka Tribune က ဖော်ပြသည်။
ကျန်းမာရေးအထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဦးစီးဌာန (DGHS) ၏ အချက်အလက်များအရ အဆိုပါကုတင်များအနက် ၇၉- ခုကို ဒါကာမြို့တော်တွင်ထားရှိပြီး၊ ဒါကာတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးတွင် ၁၀-ခုရှိနေသည်။ ကျန်ကုတင်များမှာ အခြားပြည်နယ်များ၌ ခွဲဝေချထားသည်။ ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များ၏အဆိုအရ ICU ကုတင်အရေအတွက်မှာ ၁၉၂-ခု ဟုဆိုသော်လည်း အမှန်တကယ် နေရာချထားသည်မှာ ကုတင် ၁၉၀ ဖြစ်နေသည်။
စနေနေ့ ပါလီမန်၌ ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာစီနာက ပြောကြားရာတွင် ခရိုင်တိုင်း၌ ICU ဆေးရုံများဖွဲ့စည်းရန် စီစဉ်လျှက်ရှိသည်ဆို၏။ တနင်္ဂနွေနေ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးက ပြောကြားရာတွင်မူ အောက်ဆီဂျင်ပေးရမည့် လူနာများအတွက် အစိုးရတွင် ဆလင်ဒါအိုး ၁-သောင်းရှိနေပြီး ၃,၅၀၀ ထပ်မံမှာယူထားကြောင်း၊ Covid လူနာများအား ICU တွင် သီးသန့်ပြုစုကုသပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် အသက်ရှုစက်တပ်ဆင်ပေးရသည့် လူနာ ၉-ယောက်တွင် ၈-ယောက်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
#လက်တွေ့အမှန်ဖြစ်စဉ် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စွဲကပ်ခံရသူစုစုပေါင်း၏ ၄၅ ရာနှုန်း ဖြစ်aသာ ၈၄၃-ယောက်တို့သည် ဒါကာမြို့တော်မှ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကုသပေးရမည့် ICU တွင် အသက်ရှူစက် ပါကုတင် ၇၉-ခုသာရှိသည်။ ထို့ပြင် အခြားခရိုင်များမှ အသည်းအသန် လူနာများကိုလည်း လက်ခံပေးနေရသည်။
ဒါကာတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးတွင် ဒါကာမြို့တော်မပါ ခရိုင် ၁၃-ခု၌ ပေါ့စစ်တစ်လူနာ ၇၆၃-ယောက်ရှိသော်လည်း အသက်ရှူစက်ပါကုတင် ၁၀-ခုသာရှိသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ICU ဆေးရုံတို့တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါလူနာများသာမက အခြားရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက်လည်း လက်ခံကုသပေးနေသည်။
(( ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရ-သေဆုံးသူ တွေ့ရှိရာတွင် မြန်မာထက်စောပြီး ယခုနောက်ပိုင်း ၁-ရက်လျှင် လူပေါင်း ၂-ထောင်ကျော်မှျှ စစ်ဆေးစမ်းသပ်လျှက်ရှိသည်။ စစ်ဆေးမှု့နှုန်းမှာ လူဦးရေ ၁-သန်းလျှင် ၁၆၂-ဦးနှုန်းဖြစ်၍ မြန်မာမှာ ၈၆ ယောက်နှုန်းရှိကြောင်း ယနေ့ worldometer ဖော်ပြချက်အရသိရှရပါသည်။ ။ သတင်းဘာသာပြန်သူ ))
((( Dhaka Tribune., April 20, 2020, “Bangladesh is also the 47th country to reach 100-death mark during the global pandemic.” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။အကြောင်းအရာတူဖော်ပြချက်များမှာ ပေးထားပါ Links များအတိုင်းဖြစ်သည်။ )))
One Reply to “ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်တွင် ကူးစက်ခံရသူ ၄၉၂-ဦးကို ၁-ရက်အတွင်း အများဆုံးအဖြစ်တွေ့ရှိ။ Covid-19 ဖြင့် သေဆုံးသူ ၁၀၀-နှင့်အထက်သို့ရောက်ရှိရန် ၃၄-ရက်ကြာခဲ့ပြီး၊ သေဆုံးအရေအတွက်အများဆုံး ၄၇ မြောက်နိုင်ငံဖြစ်လာ၊”
22/04/2020 at 4:46 AM
Obtain your personalized essay producing assist once you must have it! Purchasing is straightforward | Our writers will present any sort of essay providers Rapidly, Less costly, Super.
Previous Previous post: အမေရိကန်၌ Covid-19 ဖြင့် သေဆုံးအရေအတွက် သိသာစွာတိုးမလာစဉ် နယူးယောက်၌ ကိုယ်ခံအားစံနစ်စစ်ဆေးခြင်းကို အင်တိုက်အားတိုက်ဆောင်ရွက်။ လော့ဒေါင်းပိတ်ဆို့သော်လည်း အရေအတွက်များများ စစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိလျှင် ကျည်ဆန်မပါသောသေနတ်နှင့် စစ်တိုက်ခြင်းဟုဆို
Next Next post: စင်္ကာပူဘီလျှံနာ ရေနံသူဋ္ဌေးကြီး ဒေဝါလီခံမည်ဆိုခြင်း။ ဆေယ်ဒီ-ရုရှားတို့၏ နှစ် ၂၀ ရေနံစစ်ခင်းခြင်းနှင့် Covid-19 ကြောင့် ကမ္ဘာ့ရေနံဝယ်လိုအား ထိုးစိုက်ကျဆင်း